Taeyang ရဲ့ Pyeongchang 2018 Olympic အတွက်သီချင်း “Louder”
On January 11, 2018 January 22, 2018 By Atsuko
BIGBANG အဖွဲ့ဝင် Taeyang က လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် Pyeongchang 2018 Olympic အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး “Louder” လို့အမည်ရတဲ့ သီချင်းအသစ်စက်စက်ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Taeyang က လာမယ့် အိုလံပစ်အတွက်သီချင်းသီဆိုပေးမယ်ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကတည်းက ကြေညာထားခဲ့ပေမယ့် ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်နီးကပ်လာမှ ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို Taeyang ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို အိုလံပစ်မီးရှူးလက်ဆင့်ကမ်းပွဲအခမ်းအနားမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်သီဆိုခဲ့ပြီး တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုမှာပဲ Spotify၊ Apple Music နဲ့ iTunes တို့မှာ ဝယ်ယူနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်မြူးမြူးသံစဉ်နဲ့ “Louder” ကတော့ အိုလံပစ်ပွဲလာပရိသတ်တွေကို ခွန်အားတွေဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှာအသေအချာပါပဲ။
Taeyang ဟာ Pyeongchange 2018 Winter Olympic မှာ Honorary Ambassador အဖြစ်တာဝန်ယူထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ Taeyang နဲ့အတူ Honorary Ambassador အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ အခြားအနုပညာရှင်တွေကတော့ အော်ပရာအဆိုတော် Jo Sumi, Insooni, Jinusean မှ Sean, Girl’s Day, AOA နဲ့ CNBLUE မှ Jung Yonghwa တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ambassador #Taeyang wrote and composedanew song '#Louder' to cheer #PyeongChang2018! The song unveils at 12PM(KST) tomorrow. Stay tuned at @pyeongchang2018 for Taeyang's performing video!. #2018평창 홍보대사 #태양 의 대회 응원곡 '#Louder' 무대영상&음원, 내일 정오(12시) 공개! pic.twitter.com/wtFjmTNq9W
— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) January 9, 2018
Now Available to stream on Spotify !https://t.co/TphkqnOcdv
— YG FAMILY (@ygent_official) January 11, 2018
PREVIOUS POST Previous post: ‘The Greatest Showman’ ထဲကသီချင်းနဲ့ Billboard Hot 100 စာရင်းထဲ ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ Hugh Jackman
NEXT POST Next post: ချစ်စရာအသေကောင်းတဲ့ TWICE ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဂျပန် Single – ‘Candy Pop’